Wasiirkii Hore Ee Maaliyada Eng; Maxamed Xaashi Cilmi Oo Sheegay In Aan Nidaamka Qabyaaladeed Ee Dalka Sadheeyay Aan Looga Horayn Shirkii Gar-Adag,Waxaana Uu Su’aal Galiyay Cidda Daladda Dalka Gacanta Ku Haysa | Duul News International
Wasiirkii Hore Ee Maaliyada Eng; Maxamed Xaashi Cilmi Oo Sheegay In Aan Nidaamka Qabyaaladeed Ee Dalka Sadheeyay Aan Looga Horayn Shirkii Gar-Adag,Waxaana Uu Su’aal Galiyay Cidda Daladda Dalka Gacanta Ku Haysa	(Duulnews)-Eng. Maxamed Xaashi Cilmi,Wasiirkii Maaliyadda Xukumadda Madaxweyne Siilaanyo, ayaa Xukumadda ku Eedeeyay mid la kawsatay Qabyaaladda, islamarkaana Xukumaddii Rayaale kaga fiicnayd wadajirka Umadda “Horta Waxaa nasiib daro ah, Maamulkii Rayaale ee Maamulkan ka horeeyay xagga lacagta maahee, Xagga Xuduudaha dalka iyo ka hadalkiisa aad buu ugaga fiicnaa, Qabyaaladna ma lahayn Maamulkii Rayaale” ayuu yidhi Maxamed Xaashi HCTV u waramay.
Mujaahid Maxamed Xaashi oo Arrinta Qaybaaladda ka sii hadlaya waxa uu yidhi “Waxaad moodaa in Qabiilku la dhashay Shirkii lagu qabtay Gar-adag ee lagu yidhi haddaanu reer hebel nahay Madaxweynahan maanta ha naloo doorto ayay ka bilaamatay bahashu(Qabyaaladdu)”
Eng. Maxamed Xaashi waxa uu sheegay in Qabyaaladdu gashay Kuraastii Qaranka “Wasiiradaa faraha badan waxaa loo sameeyaa in reero lagu raali galiyo,Reerna Raali galin u noqon maayo, Waayo? Wasiirku reerna Biyo iyo Dawo iyo Caafimaad u noqon maayo,tacliin u noqon maayo ee waa Nin reerkiisa Masruufanaya uun, markaa intaas Umaddii lagu jaah-wareeriyo maaha. Hadda waxay marayaan 47 Wasiir, maxay qabtaan, xafiisyadana ka heli maysid”
Eng. Maxamed Xaashi waxa uu iftiimiyay in Hogaanka qaranku aanu gacanta kuwada hayn awoodiisa maamul “Horta kolka hore waxaad iswaydiinaysaa tolow yaa ina xukuma? Tolow yaa ina xukuma? Waa Su’aasha had iyo jeer dadku iswaydiiyo.Xisbigii Kulmiye Xisbi dhisan maaha, isagay ahayd inuu dalka hogaamiyo oo yidhaa arrinkaasi sharci maaha, kaasi inooma fiicna, maxaanu ku dooran Samaale iyo Ina Biixi iyo qoladan kun kunka casuumaysa, ma waanu gacan furanahay oo dadkaanu raashin siinaa baa lagu dooran, wixii Qaloocan ee Xukumadda ay ka toosan lahaayeen ma qabanayaan qolada Kulmiye oo Xisbi Xaakimkii ma shaqaynayo”
Eng Maxamed Xaashi waxa uu Xukumadda ku eedeeyay inay isbarbar yaacayso “Bal waxay odhanayaan doorasho ayaanu doonaynaa,Madaxweynihiina doorasho ayuu doonayaa, Qolo waxay leedahay Muddo kordhis baanu doonaynaa, markaa waxaad moodaa inay iyagii isgarab yaacayaan oo Madaxweynuhu hadduu hawshiisa ka adag yahay waxan baan socdeen oo anigaa Maanta doorashadii isku taagaya markuu yidhaa inay Aamusaan ayay ahayd. Iyagii baa bixinaya Calaamad ah Madaxweynihii waxba karayo, Markay tartamayaan waxay leeyihiin Madaxweynihii baan karayn oo anagaa doorashadii doonayna. Markuu Buurmadow leeyahay hadaanu reer hebel nahay ilayn Madaxweynaha reer hebel qudhi ma doorane dad ka badan baa doortaye, wuxuu deedafaynayaa waxqabadkii iyo jiritaankii Madaxweynaha, markaa waxaad Is weydiinaysaa cida ina xukuntaa waa ayo?”
Eng Maxamed Xaashi Waxa uu Madaxweyne Siilaanyo kula taliyay inuu ka tanaasulo doorashada dambe “Anigu madaxweynaha waxaan odhan lahaa inuu iska casilo oo iska nasto marka uu doorkiisan dhamaysto ayay ku fiicnaan lahayd, waayo? Xaaladda sidan ah ayaan haddana muddo kale u ololaynayaa, tanaaba laga soo bixi layahaye maxaad mid kale ka qaban”.